Nambaran’ny filoha ireo zava-nitranga sy vita ary natomboka tamin’ity taona 2019 iny. Betsaka, raha ny hevitr’ity mpanao politika ity, ny politika Mila ampahafatarin'ny fitondrana mikasika sehatra maro. Isan'izany ny resaka fiompiana sy fambolena izay mahakasika indrindra ny tantsaha 75%n’ny Malagasy. Eo koa ny fitaterana amin'ny lafin'ny rehetra izay miteraka fahalafosana eo amin'ny famoahana ny vokatra sy ny fivezivezen'ny olona. Raha aravina dia teboka miabo tamin’iny kabary iny, hoy hatrany izy, dia hita soritra ny fanarenana tian'ny fanjakana hanarenana ny firenena saingy teboka miiba kosa ny tsy fahampian'ny politika amin'ny famoronana asa sahaza ka ametraka ny hasin'ny Vahoaka Malagasy tsirairay eo amin'ny sehatra iraisampirenena.